Dhakhaatiir caafimaad oo hor leh oo maanta yimid Bossaso, bilaabayana adeegyo caafimaad oo lacag la?aan ah. – Radio Daljir
Dhakhaatiir caafimaad oo hor leh oo maanta yimid Bossaso, bilaabayana adeegyo caafimaad oo lacag la?aan ah.
Bossaso, Oct 02 ? Wafti dhakhaatiir oo ka soctay waddamo dhawr ah ayaa maanta soo gaaray magaalada Bossaso ee xarunta gobolka Bari kuwaasi oo maalmaha soo socda si rasmi ah u bilaabi doono hawlo caafimaad culus.
Dhakhaatiirtaan maanta soo gaartay magaalada Bossaso oo tiradoodu ay dhan tahay 9 xubnood ayaa iskugu jira dhakhaatiir taqasusuyo kala duwan ee dhinaca caafimaad ah leh, waxaana si gaar ah ay gacan uga gaysan doonaan qalliimada la xiriira dadka faruuran.
Isla maalinta berri ahna waxaa iyana magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland imaan doono dhakhaatiir kale oo ay isku-hawlyihin kuwa maanta yimid Bossaso, kuwaasi oo iyana tiradoodu dhan tahay 6 xubnood, sidaasina waxaa Radio Daljir u xaqiijiyey wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cali C/llaahi Warsame.
Wasiirka caafimaadka ee dawladda Dr. Cali C/llaahi Warsame, ayaa dhinaca kale sheegay isagoo u waramayey Radio Daljir, dalabka ay ku yimaadeen dhakhaatiirtaani in uu yahay mid ay gudbisay wasarradda caafimaadku iyadoo laga duulayo baahiyaha caafimaad ee deegaannada Puntland.
Dhakhaatiirtaan ayaa Puntland ku sugnaan doono gaar ahaan magaalada caasumadda ah ee Garowe muddo 10 maalmood, iyagoo fulin doono adeegyo iskugu jira, baaritaanno caafimaad, dawayn iyo qalliimo uu ka mid yahay mid loo samaynayo dadka faruuran taasoo ah mid aan horay looga heli jirin deegaannada Puntland.
Imaatinka dhakhaatiirtaan ayaa ku soo beega iyadoo todobaad ka hor deegaannada Puntland ay ka ambabaxeen khatiir badan oo ka socotay dalka Turkiga kuwaasi oo adeegyo caafimaad oo lacag la?aan ah ka fuliyey magaalooyinka Galkacyo iyo Bossaso.